ခရီးစဉ်လမ်းညွှန် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ခရီးစဉ်လမ်းညွှန်
ရေကန် Champlain –5ဤသည်ဂရိတ်ရေကန်ခံစားကြည့်ပါရန်နည်းလမ်းများ
ရေကန် Champlain အဆိုပါ U.S အတွက်လတ်ဆတ်တဲ့ရေအကြီးဆုံးကိုယ်တည်း. မဟာရအေိုငျမြားပြီးနောက်, မှာ 120 အရှည်မိုင် 400 ပျမ်းမျှအတိမ်အနက်ကို 'နှင့် 12 မိုင်ကိုဖြတ်ပြီး, အဲဒီအကြောင်းအရာခပ်သိမ်းအထင်ကြီးဖြစ်ပါသည်. ၎င်း၏အရွယ်အစားက၎င်း၏ unspoiled အလှအပထက်ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအထင်ကြီး. ပြီးသားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် back-to-သဘောသဘာဝအားလပ်ရက်များအတွက်လူသိများနေတဲ့ပြည်နယ်, ရေကန် Champlain နယူးအင်္ဂလန်အပန်းဖြေတစ်ကြီးထွားလာအရေအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်ဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. ဤတွင်ငါးနေရာများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုငါ၏ရွေးမယ့် ...
celebrity သင်္ဘော, Your Most Wonderful Vacations.
Why TakeaCelebrity Cruise Vacation? ကောင်းစွာ, with all the cruise lines available, all the cruise destinations,and the range of prices, there are cruises to please every traveller, no matter how jaded. In our fast-paced society, it's an very cost-effective and time-efficient way to takeaholiday. Think about the time involved in driving yourself to many different destinations, packing and unpacking at every hotel, and trying to find restaurants and personal services. Onac...
Do you have your trip booked and ready to take off onadream vacation? There are some things to remember when preparing for your trip. Forgetting something or being ill prepared won't be the end of the world but the added frustration can be prevented. Travel preparation is crucial and here are some tips. Some people brag about how many outfits or how many shoes they packed. Over packing can create unnecessary headaches and frustration. If you need formal clothing then bri...
Santi Mandala Resort ကိုမှာတစ်ဦးကဣနြေ္ဒပရဒိသု & သင့်ရဲ့ဘာလီကျွန်း Villas များအတွက် spa
အဘယျသို့ drive ကိုလူတို့သည်မိမိတို့အားလပ်ရက်များအတွက် Villas ရှေးခယျြဖို့? ငြိမ်းချမ်းရေး, ဣနြေ္ဒ, ပြီးပြည့်စုံသော privacy ကိုနှင့်ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းပိတ်ထားနေဖို့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း. Villas ကျေးလက်ဒေသတွင်တည်ရှိပြီးနေကြတယ်အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ကိုပတ်လည်မှာလှပတဲ့သဘာဝကရှုခင်းဆက်ကပ်. ဤရွေ့ကားသဘောထားတွေနှောင်းပိုင်း 90 ခုနှစ်ဘာလီကျွန်းရဲ့ဗဒေကျွန်းပါဝင်ပတ်သက်. အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်း 1997 အာရှပစိဖိတ်ဒေသ '' လူမျိုး၏တပြင်လုံးကိုပိုက်ဆံဖြုန်းချင်ဘဲထိခိုက်. သို့သော်ဘာလီကျွန်းတစ် mini ကိုအဆောက်အဦးစန်းပွခဲ့. ဤသည်အဓိကအားကျေးဇူးတင်စကားခဲ့သည် ...
Rotorua အတွက်ခရီးသွားတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလမ်းညွှန်, နယူးဇီလန်
Rotorua အတွက်အပူပန်းခြံများနှင့်အခြားဆွဲဆောင်မှုအများစုမှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်, နယူးဇီလန်.
When people think ofavacation in Key West, Florida they rarely realize that there is so much to do other than drinking and playing on the water. တကယ်တော့, Key West is an old historic town that will appeal to anyone interested in history or architecture. ဒါပေါ့, there are still plenty of fun things to do on the water, but in the Florida Keys many of those activities are as unique as the islands. With history comes ghost so while visiting Key West make sure to go onag...
ကြော့ရှင်းအဟောင်းကမ္ဘာကြီးခံစားဘို့, စိန့်. ပီတာစဘတ်ဝေးနေဖြင့်အကောင်းဆုံးရုရှားသောမြို့ဖြစ်၏. သငျသညျသွားလျှင်, Peterhof တစ်ဦးအလည်အပတ်, ပေတရု၏နွေရာသီနန်းတော်မဟာတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါဆောင်းရာသီ Park ကရှုခင်းသာလှေခရီးစဉ်, ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1938 and located just 15 minutes north of downtown Orlando, is one of these lovely side trips that combine beautiful scenery,abit of local history, some close-up exposure to local wildlife and vegetation witharelaxing outing inaslow-moving 18-passenger pontoon boat, all complete with expert (and sometimes humorous) narration provided by the boat's captain. The tour takes you through3lakes: Lake Osceola, Lage Virginia and...
သငျသညျကိုဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူ Maui တွင်တစ်ဘက်မြင်ချင်ပါနဲ့? တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအမြင်ကနေ Maui တွင်များ၏လှပသောကျွန်းတစ်ကျွန်းမှထွက် Check- ရေအောက်! သငျသညျသငျတို့ရှေ့ခဲ့ဖူးဘူးလျှင်ပင် scuba ရေငုပ်သွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ Maui တွင်နေရာအများအပြားရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်အပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရှိ dont လျှင်တစ်ဦးသင်တန်းပို့ချသို့မဟုတ်ငှားပစ္စည်းကိရိယာများထဲကနေလေ့လာသင်ယူ. အောက်တွင် Maui တွင် snorkeling နှင့် scuba ရေငုပ်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုပြီးဖြစ်ပါသည်. ရေငုပ်သင်လျှင်ထံမှရွေးချယ်ဖို့အဘို့များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောရေငုပ်ခရီးစဉ်ရှိပါတယ် Trips ...
When you are away from home, there is nothing more comforting that having that "နေအိမ်" feeling. That's what makes bed and breakfasts so special. You can getabed,abreakfast , andapersonal host. Staying atabed and breakfast has some important advantages. Since it is often run by local people who are most familiar with the interesting sights in the area, you not only getabed and breakfast, but often you get personal tour guides too. သင့်ရဲ့ "hosts" can tell you abo...
Stratford-အပေါ်သို့-Avon, နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုအဖြစ်, တောင်ဘက် Warwickshire အတွက်မြစ် Avon အပေါ်တစ်ဦးမြို့ဖြစ်ပါသည်. Stratford ဒေသခံမြို့မှကိုကိုးကားအတွက်အသုံးပြုသည်, အပေါ်သို့-Avon နေတုန်းမြေတပြင်လုံးခရိုင်တို့ပါဝင်သည်ထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်. -Anglo-Saxon ဇစ်မြစ်ထားရှိခြင်း, နှင့်အလယ်ခေတ်ကာလ၌စျေးကွက်မြို့အဖြစ်တက်ကြီးထွားလာ, မြို့ယခုထက် ပို. များ၏လူဦးရေရှိပြီး 23,676. Stratford-အပေါ်သို့-Avon, Elizabethan လမ်းများနှင့်အတူစီတန်း, ဝှက်ထား alleyways နှင့်အကျိုးစီးပွားသောနေရာများနှင့်အတူတွေက dotted, မွေးရပ်မြေဖြစ်ခြင်းများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါသည် ...
One of the most fundamental concepts to discount travel is flexibility. The more rigid you are in what you want to do and when you want to do it, the more you are going to pay. Simply being flexible about the dates you are willing to travel can save youabundle in airfare costs. Even better is if you can be open to traveling in many different places. If you decide, ဥပမာ, that you're willing to go anywhere in South America, as opposed toaparticular place in South America, you'll be able to take advantage of cheap fares and saveafortune. Almost anyone who isamaster of the art of discount travel will be extremely flexible and more interested in the idea of travel itself, as opposed toaparticular vacation ataparticular time. And in most cases, when you meet people who don't seem to make much money but travel all the time, this is the attitude they have.
တစ်အားလပ်ရက် booking, အဲဂုတ္တုပြည်၌ tour သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်
One World Tours မှလီမိတက်များအတွက်စစ်ဆင်ရေး၏ဗြိတိန်ဒါရိုက်တာအဖြစ်အကြှနျုပျ၏စွမ်းရည်မြှင့်အတွက်, over time, it came to my attention as to whataminefield in can be bookingaholiday inadestination like Egypt through the myriad of "internet" based travel companies; especially local Egyptian companies I therefore though it may be helpful to suggestasort of "checklist" of things to look for and questions to ask "prospective" holiday suppliers.
Inns နှင့်အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာ – သင်သိပါရန်လိုအပ်ခုနစျပါးသောအရာမြား
Urban dwellers would normally prefer to rove around the metropolis and explore every side-street in search for ideal refuge, more than traveling to remote provinces. သို့သော်, there are more than 7,000 reasons to explore the parameters of this archipelago, taking into account its profuse land and marine resources and myriad sanctuaries. Among the many interesting regions in the Philippines is the mountainous terrain and savanna in northern Luzon as inscribed in the UNESCO W...
ဖလော်ရီဒါ Everglades Airboat စီးနင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျပ Airboat ခရီးစဉ်တစ်ဦးတစ်သက်တာ၏စီးနင်းခဲ့. ငါတို့သည်ဤ Everglade စွန့်စားမှုအပေါ်မိသားစုတစ်စုလုံးကိုယူ, ထိုသို့ကြှနျုပျတို့အားလုံးအဘို့ကြီးစွာသောအတှေ့အကွုံခဲ့. အထူးကလေးကစျေးနှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖလော်ရီဒါအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းကတတ်နိုင်မိသားစု outing လုပ်, နှင့် Im သေချာလေးတွေဟာတစ်သက်တာများအတွက် Everglades ၎င်းတို့၏ airboat စီးနင်းမှတ်မိနေလိမ့်မည်. ကျနော်တို့အိမ်ကယူနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေဖို့အံ့သြဖွယ်အမှတ်တရများနှင့် Everglades ၌အကြှနျုပျတို့၏ airboat စီးနင်းဓါတ်ပုံများပြီ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်မတိုင်မှီ, ငါတောင်မှ s ကို wasnt ...
When it comes toalot of destinations, you will be able to go to many places and findatour guide to show you all of the highlights, but at the same time, you can save some money and explore the area yourself. You will find that when you takeabus tour or any other type of guided tour you will be able to really enjoy yourself. ပဌမ, you know that you are safe in the area, because safety comes in numbers, but you will also be able to see everything. Withaguided tour, you...
Are you ready to takeawalk on the wild side? Why not spend your days and nights among the lions, ဆင်, ကျားသစ်ကြုတ်, impala, hyena and warthogs inaland abundant with wildlife. You can sit besideacampfire, underamoonlit sky lit brightly with millions of stars. Some of the most exotic, historic and beautiful places in world. The biggest attraction, ဒါပေါ့, is the thrill of the hunt, to catchaglimpse of some of our worlds wild and endangered animals. This guide cov...
မင်္ဂလာပါ Orlando တွင် မှစ. – ဂေါက်သီးရဲ့ Ultimate Theme ဥယျာဉ်
Torrevieja ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကဂရိတ်အချိန်ရှိ, စပိန်
နယူးဇီလန်မိတ်ဆွေတို့ကိုအဘို့ဖြစ်၏ ‘ စွန့်စားမှု၏, ဒါက Is: နယူးဇီလန်မှခရီးသွားခြင်း
Duomo စောငျ့ Florences
Tuscany ၏ Renaissance ရေရေ